Arts-filled Lanesboro Even Has Poetry in its Parking Lots - McKnight Foundation
Farshaxanka-Lanesboro Xitaa wuxuu leeyahay gabayada dharkiisa baarkinka
Dhamaan taariikhda 30-ka sano ee taariikhda, Lanesboro Arts waxay farshaxanka ku dhejisey dharka beesha iyaga oo dhisaya shabakad farshaxan oo farshaxan iyo wada shaqeyn bulsho. Layerska saameyntu waxay ku bilaabmaysaa midba midka kale, dhisida dareen qoto dheer oo ah aqoonsi dhaqameed ee dadka deggan iyo abuurista fursado fara badan oo farshaxanada ka dhigaya gobolkan koonfur-bari Minnesota sidaas oo kale.
Sanadka 2014, Lanesboro Arts waxay wadaagaan Magaalada Lanesboro si loo abuuro Poetry Parking Lot, oo ah meel baabuurta la dhigto oo leh haiku gobolka badalashada 'park here here'. Adigoo dhigaya farshaxanka meelaha baabuurta la dhigto oo aan la isticmaalin oo ku xiraya bartamaha magaalada iyada oo loo marayo wadooyinka socodka, wada-hawlgalku wuxuu wax ka qabtaa caqabadaha bulshada ee xayiraadda xadiidka ee xadidan iyo hagaajinta ammaanka dadka.
Adigoo dhigaya farshaxanka meelaha baabuurta la dhigto oo aan la isticmaalin oo ku xiraya bartamaha magaalada iyada oo loo marayo wadooyinka socodka, wada-hawlgalku wuxuu wax ka qabtaa caqabadaha bulshada ee xayiraadda xadiidka ee xadidan iyo hagaajinta ammaanka dadka.
Hal gabay lagu doorto daabacaadda "Poetry Parking Lot" wuxuu ahaa macalin maxalli ah JoAnne Agrimson. Kadib ka qaybqaadashada dabbaaldegga mashruuca iyo helitaanka shaqaale Lanesboro Arts, waxay la xiriirtay hay'adda ururka Janaayo ee la soo dhaafay si ay u keento hay'adda hadda degan ee Michael Lee (farshaxan lagu hadlo oo ka socda Minneapolis) si ay ula shaqeeyaan ardaydeeda fasalka 7aad - Isku-duwidda sida loo heli karo fursadaha farshaxanka ee magaalo yar waxay noqon kartaa qalab awood leh oo ku dhisan dhismaha beesha iyo isku xiridda kooxaha kala duwan ee dadka.
Lanesboro Arts waxay ku guuleeysatay ujeedadeedii ahayd inay u adeegto si ay u noqoto mid xeeldheer u ah horumarinta farshaxanka iyo horumarinta waxbarashada ee bixinta waaya-aragnimo farshaxan oo kala duwan oo loogu talagalay dadka da'doodu tahay tan iyo markii la aasaasay sannadkii 1980-kii. Barnaamijku wuxuu u dhexeeyaa farshaxanka farshaxanka St. Mane, farshaxanka muuqaalka galabta, barnaamijyada farshaxanka dadweynaha, iyo, ugu dambayntii, mashruuca horumarinta bulshada iyo horumarinta dhaqaalaha ee loo yaqaan "Lanesboro Arts Campus" oo ujeedkiisu yahay in Lanesboro (pop 754) meel aad u firfircoon, oo nool.